Allgedo.com » Isbahaysiga Rajo “Dib u heshiisiin dhab ah iyo badbaadinta Qaranka weeye hawshaan hada u taagan nahay oo noo taal”
Isbahaysiga Rajo ayaa shirkii jaraaid eey qabteen waxeey si tafatiran uga hadleen sida arimaha dib u hishiisiinta iyo tan la xiriirta bad-baadinta qaranka u mari doonaan.
Waxayna xuseen in dib hishiisiinta eey wadaan eey saldhig u tahay sugista arimahan:
Waxaan dhisi doonaa gudiyo, waxaana wada shaqayn doona odayaal dhaqameedkeena sharfta leh iyo wax garadka goob kasta oo dalkeena gudihiisa ah, Dib u hishiisntu waa in eey saamaysaa Soomalida qurbaha jira si awoodooda loo mideeyo.
Rajo wexeey shirkii jaraaid ku soo qaateen in 11kii dib u hishiisiin oo horey loo sameeyay, 3 keliya oo eey Sommalidu lahayd ayaa guul laga gaaray, 8 kalana waa wada fashilmeen.
Arimaha la xiriira bad-baadinta qaranka , wexeey RAJO xustay in qatarha jira manta eey ugu weyn tahay musuq – maasuqa baahay oo masuuliinta qaranka lagu tuhmaayo, iyo damac shisheeyaha eey ka leeyihiin kaydka dhaqaale ee dalkeena oo eey rabaan in si raqiis ah eey uga iibsadaan madax aan damiir lahayn.
“Waxaan cirib tiri doonaa dhaqankan baahay oo ah: XUKUN RAADSO AAD XOOLO YEELATIDE.”
Iyadoo taa laga hor tagaayo ayeey RAJO si tafatiran uga hadashay, qorshohooda ah in sharciga dalkeena iyo kan wadamada eey ka yimaadeen masuuliyiintaas eey ku cadaato fal danbiyeedkaas iyo waliba shirkadahaas shisheeyaha ah in eey dacwado ku furi doonaan iyadoo eey hawlahaas u diyaar yihiin garyaqaano Soomali ah iyo kuwa caawinaaya doona oo ajnabi ah. Qof kasta oo Soomali ah oo sita waraaqo aqoonsi dal shisheeya ah oo u yimi Soomaliya in uu dhibaateeyo dadkan Soomaliyeed ee tabaalaysan, waxaan la tiigsan doonaa sharciga xaqiijin doona in waraaqaha aqoonsiga lagala noqdo, dabadeedna waxaa daba gal lagu samayn doona.
hantida eey lunsadeen , cid kasta eey ku qarsadeen , meel kasta oo eey maal gashadeen ama eey la shirkoobeen, waxaa sharciga dawladaha qarkood noo saamaxaayaa in hadii qofkaas dambiilha eey ku cadaato falkaas dhibkiisu waxyeeleeyay dad maata ah in la xiro mudo aan ka yarayn 8 sano, lagana manuuco in uu helo wax aala wixii xuquuq ahaa ee mawaadin ahaan uu u lahaa.